प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा राजेश अहिराजलाई लालबाबु राउत सरकारले स्वागत गर्ने, सपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष पुगेपनि उपराष्ट्रपति पुन र सभामुख सापकोटाद्वारा बहिष्कार -
७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १४:३९ ७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १४:३९ ७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १४:३९
प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा राजेश अहिराज भनिने डा. राजेश झा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश नम्बर २मा सरकारी पदाधिकारीमध्ये सबैभन्दा उपल्लो ओहोदा अर्थात प्रदेश प्रमुखको रुपमा सर्लाहीको मलंगवा निवासी पत्रकार एवं विश्लेषक झाको पुरानो घर रौतहट भएपनि हाल उनको घर मलंगवा नगरपालिका–८ मा रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार प्रदेश २ प्रमुखमा डा. झालाई नियुक्त गरेकी हुन् । प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका झाले मधेस मामिलामा विद्यावारिधी नै गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १६३ को उपधारा (२) बमोजिम झालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । आजै झाको सपथ ग्रहण पनि गरिएको छ । उक्त सपथ समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना मात्र सहभागी भए ।
संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमप्रति उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बहिस्कार गरेका छन् । उपराष्ट्रपति पुन र सभामुख सापकोटाले असहमति राख्दै आएका छन् । प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेकाले उनीहरु सहभागी नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघि शुक्रबार नै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेश प्रमुखबाट तिलक परियारलाई पदमुक्त गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रदेशसभासमेत विघटन गर्न सक्ने सरकारको संकेतपछि प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरिएपछि थप संशय उत्पन्न भएको छ ।
परियारलाई पदमुक्त गरी डा. झलाई नियुक्त गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
झा प्रतिनिधिसभा विघटनलगतै विभिन्न संचारमाध्यम तथा समाजिक संजालमा प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउ गर्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहविरुद्ध आक्रमक रूपमा प्रस्तुत आउँदै गरेका थिए । राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभले दूधमतीसंग करा गर्दै प्रदेश प्रमुख पद पनि असान्त जस्तै बनेको टिप्पणी गरेका छन । पदको कुनै मर्यादा रहेनन् बताउँदै उनले भने यो भन्दा अघि पनि यसरी नै प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाइएको थियो । ‘कु’ को कुनै संकेत देखिदैनन् तर हलचल अवश्य ल्याएको उनको कथन छ । उनले प्रदेश २ सरकार भित्रकै समूहसंग संघिय सरकार खिचडी पाकी रहेको यसबाटै नयाँ गुट संघको केन्द्रिय सरकारसंग मिलेर जाने सम्भावना रहेको समेत बताए । केहीदिन अघि मधेश आन्दोलनमा लागेका प्रभावशाली युवाहरु नेकपा ओलीमा गएका थिए ।
यसै विषयमा प्रदेश २का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण यो घटना घटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसमा प्रदेश २ को कुनै सम्बन्ध नरहेको उनले प्रष्ट पारे । यो राजनीतिक अवस्थाको उपज हो जस्तो लाग्छ मलाई । अन्य कारण भन्दा पनि राजनीतिक कारण यस्तो भएको हो । यो नेकपाकै आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व, अन्तरकलह, दुई गुटका कारण भएको देखिन्छ । यसका सहायक कारणहरू धेरै हुन सक्छन् । २ नम्बर त स्टेबल नै छ चिन्ता गर्नु पर्दैनन उनले अगाडि बताए ।
एकाएक पदमुक्त गरिएपछि आफू चकित भएको परियारले दूधमतीलाई बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग राम्रै सम्बन्ध भएका रहेको तर शुक्रबार दिउँसो एकाएक राष्ट्रपतिको पत्रले चकित भएको उनले बताए । पदमुक्त गर्न सक्नेबारे यसअघि कुनै संकेतसमेत नपाएको परियारको भनाइ छ ।
‘मलाई पद मोह छैन । आन्दोलनले जन्माएको पात्र भएकाले मेरो लगानी र योगदानलाई कदर गरेर पार्टीले पदमा बसाएको थियो,’ परियारले भने, ‘एकाएक पदमुक्त गरिएपछि प्रतिनिधिसभाजस्तै ’कू’मा परेको महसुस गरेको छु ।’
नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख झाले नेपालमा यसपाली संघीयताको प्रयोग अन्तिमपल्ट रहेको भनी दिएको अभिव्यक्तिसँग आफू सहमत नरहेको बताउँदै संघीयता खारेजीको कुनै सम्भावना नरहेको उनले बताए ।
‘धेरै त्याग, बलिदान र संघर्षपछि संघीयता आएको हो । खारेजीको कुनै सम्भावना छैन । सरकारले त्यस्तो दुस्साहस नगर्ला,’ परियारले थपे । करिब १६ महिनाको कार्यकालमा संघीय सरकारले निरन्तर सहयोग गरेको उनले जनाए ।
यो मामिला संघीय सरकारको हो त्यसले हामीलाई केही फरक पार्दैन । प्रदेश सरकारले ल्याएको विद्येयकको कारण होइन । यो पार्टी भित्रकै विवादको उपज हो । यो प्रदेश २ को विषय होइन संघीय सरकारको हो । उहाँ संघीय प्रतिनिधि हो ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेकपा प्रदेश २ संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतोले परियार प्रचण्डनिकट रहेकाले संघीय सरकारले हटाएको हुनसक्ने बताए । तर, प्रदेशसभा विघटनको सम्भावना नरहेको उनको दाबी छ ।
‘प्रनिधिसभा पुनर्स्थापना भइसकेकाले प्रदेशसभा के विघटन हुन्छ ? त्यसो ग¥यो भने आन्दोलनको आँधीबेरी आउँछ,’ महतोले भने, ‘प्रदेशसभा विघटना गर्नु भनेको संघीयतामाथि सीधा प्रहार हुनु हो । त्यसैले सरकारले त्यस्तो दुस्साहस गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन् ।’
प्रदेश सरकारले स्वागत गर्ने
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश प्रमुख पदमुक्त र नयाँ नियुक्तको विषयमा केन्द्रको निर्णय मान्ने बताएका छन् । दूधमतीसंग कुरागर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशमा जो–जस्तो व्यक्ति प्रमुख बनेर आएपनि स्वागत गर्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
‘केन्द्र सरकारले निर्णय गरिसकेको छ, के भन्नू ? हामी जो सुकै प्रमुख आएपनि स्वागत गर्छौं,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने ।